Faah faahin Qaraxyo Caawa Muqdisho Gil gilay Shabaab oo war ka soo saaray iyo Dowlada oo ku tilmaamatay Dheemish – Daily Som
Faah faahin Qaraxyo Caawa Muqdisho Gil gilay Shabaab oo war ka soo saaray iyo Dowlada oo ku tilmaamatay Dheemish
Faahfaahino dheeraad ah oo ku saabsan Madaafiic iyo qaraxyo caawa fiidnimadii lagu weeraray qeybo ka mid ah degmooyinka magaalada Muqdisho.
Hoobiye yal aan loo ogeyn halka laga soo ridayey ayaa lagu garaacay xaafadaha qaar, waxaana barbar socday qaraxyo kale oo loo adeegsaday bambooyin gacanta.
Xaafadaha laga maqlay madaafiicda iyo qaraxyada ayaa waxaa ka mid ah Degmooyinka Wardhiigley, Hodan, H/wadaag, Waaberi, Xamar weyne, Dayniile, Xamar jajab oo ka wada tirsan Muqdisho.
Xoogaga Ammaanka ayaa sheegay iney tageen goobo kala duwan oo dhawaqyada qaraxyada laga maqlay hase yeeshee aysan la kulmin qof ay waxyeello ka soo gaartay wixii caawa laga maqlayay magaalada.
Faah faahin Qaraxyo Caawa Muqdisho Gil gilay Shabaab oo war ka soo saaray iyo Dowlada oo ku tilmaamatay Dheemish added by Staff on May 16, 2018